प्रहरी अस्पतालले कहिले पाउला नेतृत्व ? – Health Post Nepal
२०७६ पुष २९ गते १७:०६
बढुवा विवादमा परेसँगै प्रहरी अस्पतालले नेतृत्व पाउन अझै केही दिन लाग्ने भएको छ । नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकतर्फको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) बढुवा सिफारिसविरुद्ध परेको उजुरीको किनारा नलाग्दासम्म अस्पताल निमित्तकै भरमा चल्ने भएको छ ।
प्राविधिकतर्फका नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) डा. मीनराज पाठकले शुक्रबार लोकसेवा आयोगको बढुवा तथा विभागीय सजाय परामर्श शाखामा उजुरी दिएपछि बढुवा सिफारिस कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ भएको हो । यसका कारण प्रहरी अस्पताल नेतृत्वविहीन बनेको छ ।
गत सोमबार बसेको बढुवा समितिको बैठकले प्राविधिकतर्फकी डिआइजी डा. आशा सिंहलाई एआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ । तर, डा. मीनराज पाठकले आफूभन्दा जुनियर डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा सिफारिस गरिएको भन्दै लोकसेवा आयोगमा उजुरी दिएका छन् ।
प्रहरीको बढुवा सिफारिसमा चित्त नबुझे लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष संयोजक रहेको समितिमा उजुरी दिन सकिन्छ । समितिमा मुख्यसचिव र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहन्छन् ।
उजुरीविरुद्ध समितिले १५ दिनभित्रमा निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार बढुवा कार्यान्वयन हुन अझै केही दिन लाग्ने देखिन्छ । उजुरी परेपछि एआइजीमा सिफारिस भए पनि सिंहको बढुवा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
प्रहरी अस्पतालमा पाठकले नै निमित्तका रूपमा काम गरिरहेको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी शैलेश थापाले जानकारी दिए । प्राविधिकतर्फकी एआइजी डा. दुर्गा थापाले ३ पुसमा अनिवार्य अवकाश पाएपछि डिआइजी पाठकले प्रहरी अस्पतालको निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
प्रहरी निरीक्षकदेखि डिएसपी, एसपी, एसएसपी र डिआइजीमा बढुवा हुँदासम्म एक नम्बरमा रहेका पाठक पछिल्लो ३ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पछि परेका हुन् । पाठकसहित एआइजीमा बढुवा सिफारिस भएकी सिंह र डा. सुमनराज श्रेष्ठ १ पुस ०७५ मा प्रहरीको प्राविधिकतर्फको नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) मा बढुवा भएका थिए । प्राविधिकतर्फको एआइजी प्रहरी अस्पतालको प्रमुख हुन्छन् ।
Tags: एआइजी बढुवा, डा. आशा सिंह, डा. मीनराज पाठक, नेपाल प्रहरी, नेपाल प्रहरी अस्पताल